Kaiamba : nodimandry i Levelo Dorlys F. | NewsMada
Kaiamba : nodimandry i Levelo Dorlys F.
Banga iray indray ny Kaiamba ! Tsy ho hita eny an-tsehatra intsony i Levelo Dorlys, ilay manana feo kanto sady avo. Ankoatra ny fihirana, havanana tanteraka amin’ny famoronan-kira izy.
Manjombona ny tontolon’ny zavakanto malagasy. Nindaosin’ny fahafatesana omaly, teo amin’ny faha-63 taony, i Levelo Dorlys F., iray amin’ireo mpihira mandrafitra ny Kaiamba. Raha ny vaovao nampitain’i Prosh’Ely, tosidra tafiakatra ambony loatra no nitarika ny fodiamandrin’ity andrarezin’ny hira malagasy ity, omaly, tamin’ny 9 ora maraina teny amin’ny hopitaly Befelatanana.
Mpanakanto havanana tanteraka amin’ny famoronan-kira sy mihira i Dorlys. « Manana feo ambony tokoa izy. Mpankafy ny hiran’i Ludger Andrianjaka rahateo, i Dorlys », hoy i Prosh’Ely. Sanganasany anisan’ny tsy afaka am-bavan’ny Malagasy maro ny « Sipa voadona », « Papa sy mama », « Deux francs cinquante »… Hainy tsara ny mamoaka amin’ny fihetsika izay ambaran’ny tononkira rehefa eny an-tsehatra hany ka mora tafita ny hafatra fonosin’ilay hira.
Fantatra fa eo am-panomanana fitetezam-paritra manerana an’i Madagasikara, amin’izao fotoana izao ny tarika Kaiamba. Tamin’ny herinandro nivalona teo, « nanao studio ho fanomanana io fampisehoana mitety faritra io izahay », hoy i Prosh’Ely.
Niasa sy nisotro ronono teo anivon’ny fiadidiana ny fonja i Levelo Dorlys F. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana ny gazety Taratra.
Hoentina etsy amin’ny Tranom-pokonolona Analakely anio antoandro ny razana. Hiala ao rahampitso antoandro ka hoentina any Mananjary.